Qeyb kamid ah qalabka maamulka Hawada Soomaaliya oo maanta xariga laga jaray | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qeyb kamid ah qalabka maamulka Hawada Soomaaliya oo maanta xariga laga jaray
Qeyb kamid ah qalabka maamulka Hawada Soomaaliya oo maanta xariga laga jaray
Muqdisho(SONNA) Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xarigga ka jaray isticmaalka qeyb kamid ah qalabkii loogu talagalay maamulka Hawada gaar ahaan qeybta saadaasha Hawada.
Munaasabadda xarrig jarka oo ka dhacday Garoonka diyaaradha Aadan Cade ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiinta Wasaradda,guddiga Gaadiidka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Mudane Maxamed C/llaahi Salaad Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu qalabkani qeyb ka yahay maamulka Hawada Soomaaliya,isagoo maanta si rasmi ah uu xarigga uga jaray qalabkaasi oo si gaar ah u qaabisan qeybta Saadaasha Hawada.
Dowladda Soomaaliya iyo Hay’adda duulimaadka Caalamiga ah ee ICAO oo hoostagata Qaramada Midoobey ayaa dhawaan kala saxiixday heshiis ku saabsan in si deg deg ah Muqdisho loogu soo wareejiyo maamulka Hawada Soomaaliya, muddo kabadan 25 sano kadib tan iyo burburkii Dowladii Dhexe ee Soomaaliya.
Previous articleXubno ka tirsan Guddiga difaaca Golaha shacabaka iyo Guddoomiyaha Maxkamada Ciidamada oo Socdaal ku maraya Gobolka Bakool
Next articleRa’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray New York